कती दाँत पातलो कतरनी को लागी उत्तम छ? Thinning कैंची छनौट - जापान कैंची
यो पातलो कैंची नियमित जस्तै देखिन्छ कपाल काट्ने जे होस्, उनीहरु काट्ने ब्लेड मा आकार मा फरक छ। पातलो कैंची सुविधा ब्लेड कि एक निर्बाध, सीधा ब्लेड छैन, दाँत को पows्क्तिहरु शामिल। ब्लेडमा दाँत हुन्छन्। दाँतको संरचना कपाल काट्ने को एक अंश मात्र परिणाम हुनेछ।
पातलो कैंची कि hairdressers र hairstylists प्रयोग सामान्यतया 30-40 दाँत छन्।
एक ४० दाँत समान रूप मा दूरी मानक thinning कतरनी र एक ५ दाँत खाच प्रत्येक कपाल को ३५ प्रतिशत काट्न सक्छ (अर्थात् तपाइँ ३५%को कटौती प्रतिशत हुनेछ) तर परिणाम अन्य कतरनी उत्पादन अन्य को तुलना मा फरक छ।
सामान्य thinning कतरनी बराबर तौल बन्द गर्न सक्षम छ, जबकि पाँच दाँत खाच एक टूटेको परिणाम को धेरै अधिक। धातु को दाँत प align्क्तिबद्ध गरीरहेछ कि स्टाइलिस्टहरूले कतरनी दाँत को लागी उपयुक्त छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ।
पातलो कैंची को एक प्रकार छान्नुहोस् विशेष गरी समारोह को लागी डिजाइन गरीएको। त्यहाँ सामान्य उद्देश्य कैंची उपलब्ध छन् तर उनीहरु सधैं तपाइँ इच्छित परिणाम दिनेछैनन्। तपाइँको ब्लेड मा जति धेरै दाँत छ र कम कपाल काटिएको छ। अतिरिक्त कपाल हटाउन को लागी यो केवल केहि दाँत संग कैंची चयन गर्न को लागी सिफारिश गरीन्छ, यो कपाल को ठूलो भागहरु काट्न को लागी अनुमति दिन्छ। उनीहरु धेरै साहसी कपाल शैली बनाउन को लागी महान छन्।
दाँत को एक उच्च मात्रा कपाल को अधिक मात्रा मा कटौती प्रति कटौती गरीन्छ। यदि तपाइँ सानो मात्रा मा हटाउन को लागी तपाइँ तपाइँको कपाल वा बैंग्स को अन्त्य thinning वा परतहरु मिश्रण गरीरहनु भएको छ यी कैंची एक राम्रो विकल्प हो। कतरनी को प्रकार सामान्यतया दाँत को दुई पows्क्ति संग आउँछ, त्यसैले तपाइँको मन मा डबल पows्क्तिहरु सहन जब चयन। अक्सर, कैंची को प्याकेजि percentage्ग प्रतिशत को एक राशि हो कि एक विशेष खण्ड भित्र कपाल को मात्रा प्रत्येक पास मा हटाइनेछ संकेत गर्दछ।
थोरै वा धेरै दाँत संग कैंची पातलो मा एक फरक
एक कतरनी कि पातलो दाँत र उनीहरु को बीचमा सानो ठाउँहरु एक तरीकाले तौल हटाउन सक्छ कि एक स्पष्ट थोक वा बनावट छैन। दुवै काटिएको र undamaged कपाल मिश्रण गर्न जान्छ। सामान्य कतरनी 30 र 45 दाँत को बीच मा छ, ब्लेड को आकार मा निर्भर गर्दछ। पातलो कतरनी कटौती बाट कुनै पनि तीखोपन हटाउन कैंची अंक बाहिर चिकनी को लागी आदर्श हो।
विगतमा, मिश्रण को लागी लगभग सबै कतरनी दुई हानि थियो। पहिलो यो थियो कि स्टाइलिस्ट लाई बिभिन्न तरीकाहरु को उपयोग गर्न को लागी लाईन काट्न बाट रोक्न को लागी आवश्यक थियो। कपाल ठाउँ मा तय भएको थियो र त्यसपछि उही ठाउँ मा ब्लेड संग काट्ने लाइनहरु बनाउन सम्भव छ।
काट्ने लाइन अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसोभए, यदि कपाल काट्नेहरु हात काटेर पछाडि आफ्नो हात तान्न चाहन्छन् उनीहरु ब्लेड हटाउन र दाँत को बीच मा भएको सीधा ब्लेड संग यो तानेर ग्राहकको कपाल तान्ने जोखिम नगर्ने ख्याल राख्नु पर्छ।
Thinning को लागी मैले कैदी किन्नु पर्छ? मलाई कतिवटा दाँत चाहिन्छ?
A: के म उनको कपाल को शीर्ष मा केहि कपाल पातलो गर्न पातलो कैंची को एक जोडी किन्न चाहन्छु। जब म इन्टरनेट ब्राउज गर्छु, मँ २० दाँत को रूप मा थोरै संग भेट्टाउँछु, जबकि केहि ४५ दाँत को रूप मा ठूला हुन्छन्। कसैको दाँत मात्र एक ब्लेडमा छ, जबकि केहि दाँत संग सुसज्जित छन् कि दुबै ब्लेड कभर छन्।
त्यहाँ पातलो कतरनी को लागी विज्ञापनहरु छन् जसमा ५० प्रतिशत कपाल हटाईन्छ, जबकि अन्य विज्ञापनहरु मात्र १५ प्रतिशत देखाउँछन्। कृपया मलाई बुझ्न मद्दत गर्नुहोस् कि म पातलो को लागी सबै भन्दा राम्रो कतर किन्न को बारे मा सचेत हुनु पर्छ।
यो सामान्यतया मुख्य मुद्दा हो कि व्यक्तिहरु लाई सामना गर्दा पातलो हो कि कतरनी मा देखीरहेको छ। विधि उनीहरु संचालित सहज छैन। यो किनभने धेरै दाँत एक जोडी पातलो कतरनी धेरै दाँत छन्, कम कपाल हटाइन्छ। जे होस्, कम दाँत संग कतरनी, अधिक फराकिलो र फराकिलो ठाउँ अधिक कपाल र ठूलो हिस्सा मा बाहिर निकाल्छन्।
पातलो कतरनी को एक जोडी को विवरण मा दिइएको प्रतिशत कपाल को एक टुक्रा मा ब्लेड बन्द गरेर काटिएको कपाल को एक अनुमानित अनुपात हो।
१५ प्रतिशत हटाउने कैंची एक ब्वाँसो संग ब्लेड बीच कपाल बाट लगभग १५ प्रतिशत हटाउन जाँदैछन्। तपाइँ धेरै कटौती को उपयोग गरेर अतिरिक्त १५% बृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कारण यो कम प्रतिशत संग पनी तपाइँ यो सुनिश्चित गर्नै पर्छ कि तपाइँ यसलाई "धेरै" कतरनी को उपयोग गरेर, वा तपाइँ केहि पर्याप्त कपाल हटाउने बनाउन सक्छ।
उच्च दाँत गणना संग कैंची सामान्यतया मिश्रण र eli को लागी प्रयोग गरीन्छminate कपाल स्टाइल को थोक, विशेष गरी ठीक गर्न को लागी मध्यम, सीधा टाउको कपाल प्रकार को लागी। यो शायद केश को प्रकार को लागी तपाइँ खोज्दै हुनुहुन्छ। म कतरनी सुझाव दिन्छु कि कपाल प्रति कपाल बाट १५ प्रतिशत को आसपास टाढा लिन को लागी यो केहि अधिक हटाउन सम्भव छ, तर तपाइँ यसलाई काट्न पछि मा राख्न को लागी सक्षम हुनुहुन्न।
सानो संख्या/फराकिलो दाँत कतरनी को लागी हुन् घुम्रेको कपाल प्रकार को रूप मा उनीहरु कर्ल को टुक्रा हटाउन र कपाल लाई हल्का र कम भारी देखी छोड्न को लागी यो "फैलाउन" बिना गर्न सक्छन्। Straighter कपाल प्रकार को लागी कैंची को यी प्रकार को उपयोग एक अप्राकृतिक, gapped उपस्थिति दिनेछ र सामान्यतया रुचाइएको छैन।